रोशनीलाई ज्वालाको सुझाव: दिनमा पाँचपल्ट पि’साब फेरेजस्तो बोली नफेर्नु – Articles Nepal
रोशनीलाई ज्वालाको सुझाव: दिनमा पाँचपल्ट पि’साब फेरेजस्तो बोली नफेर्नु
Articles Nepal October 3, 2019 0
पछिल्लाे समय सभामुख प्रक’रणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालकाे बे’इज्जत भएकाे छ । यसै बिषयमा धेरैले सामाजिक संजालभरी निकै आ’लोचना गरेका छन् । त्यसै बिषयमा सामाजिक संजाल फेसबुकमा ज्वाला संग्रौलाले रोशनी शाहीलाई सुझाव दिएकी छिन।
यस्तो छ उनको फेसबुक पोस्ट
28 बर्षसम्म श्रीमान र समाजको आँखा छलेर परपुरुषलाई यौ’वनको सौदा अर्पित गर्यौ! आज २८ बर्षपछि ब्याजसहित पाएको तिम्रो ‘पारपाचुके’ अबको आउने दिनमा सेफ़ ल्याण्डिङ होस्। फेरि काजु, बदाम र हिमालयन ह्विस्कीको चुस्कीमा आफूलाई गिजोलेर सारा नेपाली नारीको निधारमा क’लंकको कालो टिका नलगाईदिनु! दिनमा पाँचपल्ट पि’साब फेरेजस्तो मौसमी बोली पनि नफेर्नु ! अनि कसैलाई काका, बाऊ र सरको साईनो लगाउनु अघि कृष्ण बहादुर महराको बला’त्कारी थोपडा याद गर्नु ! तर यी सब गर्नु अघि कृपया एकपटक मानसिक स’न्तुलन अनिवार्य रुपमा चे’कजाँच गराउनु।
हुनत तिमी आफ्नै बाध्यताका लहराहरुमा जेलिएकी थियौ होला , ध’का कठघरमा अ’भियुक्त बनाएर उँभ्याईएकी थियौ होला, ला’लचका सौर्यमण्डलहरु घुमाईएकी थियौ होला तर तिमीलाई थाहा छ कि छैन रामायणको एक कहानी जहाँ सुनको मृग देख्दा लोभिएकी सीतालाई सुनैसुनका दरबारले भरिएको लंकाले पनि आकर्षित गर्न सकेन किनकी उनलाई आफ्नो पतिको मायाको अगाडि धन, सम्पति, रोयल स्टेट सब बकबास र फिक्का लागेको थियो! नारी भनेको त्यस्तो उदाहरणीय पात्र हो! तर आज तिमीले गर्दा जय नारी हैन,
#गय_नारी भन्ने शब्द मुखमा आईराछ किन किन..!
Previous Post: महरा प्रक’रण: रोशनीले गरिन श्रीमानसंग डि’भोर्स -पत्रसहित
Next Post: ज्ञानेन्द्र शाहीको आमा रुँदै मिडियामा – भिडियो